မြန်မာ့ယွန်းထည်များ ဥရောပနှင့် အနောက်နိုင်ငံဈေးကွက်တွင် ထိုးဖောက်နိုင်ရန် ထုတ်ကုန်အသစ်?? - Yangon Media Group
မြန်မာ့ယွန်းထည်များ ဥရောပနှင့် အနောက်နိုင်ငံဈေးကွက်တွင် ထိုးဖောက်နိုင်ရန် ထုတ်ကုန်အသစ်??
မြန်မာ့ယွန်းထည်များမှာ ပြည်တွင်းဝယ်လိုအားထက် ပြည်ပဝယ်လိုအား ပိုမိုများပြားနေသဖြင့် ဥရောပနှင့်အနောက်နိုင်ငံ ဈေးကွက်တွင် ထိုးဖောက်နိုင်မည့် ယွန်းထုတ်ကုန်အသစ်များကို ယခုနှစ်အတွင်း ထုတ်လုပ်နေကြောင်း Bagan House Lacquerware Workshop မှ Proprietor ဒေါ်မော် မော်အောင်ထံမှ သိရသည်။ ရိုးရာ ယွန်းထည်များကို မပျောက်ပျက်အောင် တစ်ဖက်က ထုတ်လုပ်နေသကဲ့သို့ တစ်ဖက်ကလည်း မြန်မာ့ယွန်းဈေးကွက် ကျယ် ပြန့်စေရန် ဥရောပနှင့် နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ဝင်မည့် ယွန်းထည်များကို ဖန်တီးနေခြင်းဖြစ်သည် ဟုဆိုသည်။
”ကျွန်မတို့ ယွန်းထည်တွေကို ပြည်တွင်းကထက် ပြည်ပကဝယ်တာပိုများပါတယ်။ ယွန်းလုပ်ငန်းရှင် တော်တော်များများက တချို့က ရိုးရာပဲလုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ တော်တော်များတယ်။ ကျွန်မကကျတော့ ဘာသွားမြင်လဲဆိုတော့ နိုင်ငံခြားတွေလည်း သွားတဲ့အခါ မှာ နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းအဖြစ် ထုတ်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ပိုပြီးတော့ ဈေးကွက်ရနိုင်မယ်ဆိုပြီးလုပ်တာ။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ယွန်းလုပ်ငန်းက ဘုရား တွေရဲ့ နံရံဆေးရေးပန်းချီကနေ ကျွန်မတို့ယွန်းကို ဆင်းသက်လာတာ။ ဟုတ်တယ်။ ကျွန်မတို့ရိုးရာကို ပျောက်မှာ အရမ်းတော့စိုးရိမ်ရတယ်။ သို့သော်ငြားလည်း ကျွန်မတို့မှာ နည်းနည်းတော့ ကျွန်မတို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ သုံးစွဲမှုမှာ added လုပ်ပေးချင်တယ်။ ကျွန်မဘယ်လိုသွားတွေ့လဲဆိုတော့ မြန်မာလူမျိုးက ယွန်းခွက် (မြင်း မြီးရွှေခွက်) တွေကို ရေခွက်အတိုင်း သောက်ကြတာပေါ့။ ပြင်သစ်ကနိုင်ငံခြားသားတွေ၊ ဂျာမနီ ကလူတွေ အလုံး ၃ဝဝ၊ ၅ဝဝ မှာတယ်။ ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ ကျွန်မတို့က သောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ ခွက်လေးဟာ သူတို့နိုင်ငံမှာ ညစာ စားပွဲမှာ မီးမှိတ်လိုက်တယ်။ အဲဒီ ထောင့်လေးမှာ ရွှေခွက်၊ ငွေခွက်ထဲကို ရေထည့်ပြီး ဖယောင်းတိုင်ထွန်း ပြီးတော့ Romantic လုပ်ကြတယ်။ သူတို့နိုင်ငံရောက်သွားတော့ Decorative item ဖြစ်သွားတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ယခုနှစ်တွင် ယွန်းထည်ဒီဇိုင်းသစ်၊ ထုတ်ကုန်အသစ်များအဖြစ် ခုံညင်းဒိုးများအား ယွန်းထည်အဖြစ် ကနုတ်များရေးဆွဲခြင်း၊ ခုံညင်းဒိုးကို သစ်စေးသုတ် ရွှေပိန်းချကာ ပုတီးလုပ်ခြင်း၊ ခုနစ်နေ့ခုနစ်နံရေးဆွဲထား ခြင်း၊ ပိတ်စ၊ သစ်စေးများကို ရွှေပိန်းချကာ ဆွမ်းအုပ်ပုံ၊ သစ်ရွက်ပုံ၊ ညောင် ရေအိုး၊ ညောင်ရွက်ပုံ ရွှေအစစ်ချ ရင်ထိုးများဖန်တီးခြင်း၊ ယွန်းထည်တွင် ကြက်ဥခွံကပ်၍ ဖန်တီးခြင်း များပြုလုပ်ထားကြောင်း သိရသည်။ ထို့ပြင် ဥရောပဈေးကွက်အကြိုက်ဖြစ်သော အရောင်မှိန်မှိန်ယွန်း ထည်များကိုလည်း ထုတ်လုပ်ထား ကြောင်း၊ နိုင်ငံခြားသားဒီဇိုင်နာများ ဖြင့်လည်း ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်နေ ကြောင်း သိရသည်။
”ယွန်းထည်ကို တန်ဖိုးမြင့်ထုတ် ကုန်အဖြစ် စိန်အစစ်ထည့်ပြီး နားကပ်၊ လက်စွပ်တွေဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီနှစ်ထဲမှာ ရိုးရာတွေအ ပြင် မော်ဒန်ခေါ်မလား။ အစိမ်းရောင် ကားချပ်ကြီး(ယွန်းထည်) အဝေးက ကြည့်ရင်တော့ ဘာမှမမြင်ရဘူး။အစိမ်းရောင် မှိန်မှိန်လေးတွေပါ တယ်။ ယွန်းရောင်းလာတဲ့သက်တမ်း တစ်ခုမှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့ ကျွန်မတို့အာရှတိုက်ကလူတွေက ပြောင် လက်နေမှကြိုက်တယ်။ အနောက်နိုင်ငံကလူတွေက မှိန်မှကြိုက်တယ်။ မှိန်မှိန်လေးကို ဖန်ဆင်းလိုက်တော့ ဥရောပနဲ့ အနောက်နိုင်ငံ ဈေးကွက် တွေမှာရလာတယ်။ ပြင်သစ်က ဒီဇိုင်နာနဲ့ပေါင်းပြီးဖန်တီးဖြစ်တဲ့ မြင်းကျား ပုံလည်း ဖန်တီးထားတယ်။ အဲဒါလည်း ဈေးကွက်ရတယ်။ နောက် ကျောက်သင်ပုန်းကို ယွန်းနဲ့ကွပ်လိုက်တယ်။ ဟိုတယ်တွေမှာလည်း Menu ရေးဖို့ အသုံးပြုလာကြတယ်။ Remote ထည့်ဖို့ ဝါးနဲ့ပြုလုပ်ထား တာတွေလည်းရှိပါတယ်”ဟု Bagan House Lacquerware Workshop မှ Proprietor ဒေါ်မော်မော်အောင်က ဆက်လက်ပြောသည်။
ယွန်းထည်များ အသစ်ဖန်တီး ထုတ်လုပ်နေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေ ၁၉ရက်တွင် Bagan House ၌ စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ယင်းရှင်းလင်းပွဲတွင် အသစ်ထွင်ထား သော ဝါးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအရုပ်များအပါအဝင် အာရှဈေးကွက်ဝင်၊ ဥရောပ ဈေးကွက်ဝင် ယွန်းထည်အသစ်များ အားမိတ်ဆက်ပြသခဲ့ကြောင်း၊ နိုင်ငံ တော်အနေဖြင့် ယွန်းလုပ်ငန်းအား Decorative items အဖြစ် ပြည်ပ နိုင်ငံများတွင် မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပါက နိုင်ငံခြားဝင်ငွေတိုးလာမည့် အကျိုးများ ရရှိလာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဘိလပ်မြေစက်ရုံ စီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းပေးရန် ရန်ကုန်တွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့သည့် ဦးဆောင်သူ ငါးဦး